Waseda University - Ọmụmụ na Japan. EducationBro Magazine
tọrọ ntọala : 1882
Students (ihe ruru.) : 55000
Echefukwala discuss Waseda University
Waseda University esetịpụ dị ka ya okobot ụkpụrụ ichebe nnwere onwe nke mfọn, nkwalite nke bara uru ngwa nke mfọn, na na eme nke ezigbo ụmụ amaala.
-Ejide onwe nke mfọn dị ka a Central ụkpụrụ, Waseda University nkwa na-eme ka mfọn nke ụwa site banyere nnwere onwe nke nnyocha dị ka mkpa na-ege onwe ya mgbe niile ka ná nnyocha.
-Ejide ndị bara uru ngwa nke mfọn dị ka a Central ụkpụrụ, Waseda University nkwa na-eme ka ọganihu nke oge site guzosie ike a ụzọ maka ndị bara uru iji ihe mfọn nakwa dị ka na-achụ usoro iwu research n'ihi na ya onwe m.
-Ejide na eme nke ezi ụmụ amaala ka a Central ụkpụrụ, Waseda University nkwa ịzụlite ndị kọrọ akụkọ nwere ike na-akwanyere iche, ịzụlite onwe ha na ndị ezinụlọ ha, -erite uru mba na otu, na-arụsi ọrụ ike na ụwa na nnukwu.
The mgbanwe ka a zuru ụwa ọnụ na borderless ụwa a na inweta ọkụ kwa afọ, emetụ ọ bụla oru nke ọha mmadụ, na mahadum na-sokwa. Kpọọ dị ka anụ ụlọ na ndị si mba ọzọ ejighi ha pụtara, dị ka mahadum n'ụwa nile na-eche ihu esiwanye di ọku mpi na ha-achụ ihe ndị kasị elu-àgwà agụmakwụkwọ na nnyocha.
Ebe ọ bụ na ntọala, Waseda University kemgbe chebaara mgbanwe otu ma na-ya isi ụkpụrụ. Anyị n'atụghị egwu weere on a dịgasị iche iche nke nsogbu na ike adịghị agwụ ya chua ọhụrụ. Waseda e wuru anyị ọtụtụ ụzọ na ha ji e me embodying a tọọ ntọala spirit. Otú ọ dị, dị ka anyị na-enwe A oge nke oke mgbanwe, M na-ahụ ya dị ka ndị ozi na ibu ọrụ nke taa Waseda ị ga n'ihu ụlọ on a na omenala.
Anyị ọhụụ bụ na-edu na zuru ụwa ọnụ muta na nnyocha. The ụkpụrụ nduzi Best Education, Best Research, Best Community, -anọchi anya anyị mkpokọta ebumnuche iji nweta ụwa-klas ya pụta na anyị niile nchụso. M kweere na ugbu a bụ oge ka pịa na-atụ na Waseda si omenala uchu spirit lebara ọtụtụ ihe ịma aka n'ụwa ugbu a chere ihu.
N'ezie, ewere on zuru ụwa ọnụ nsogbu na-achọ nke mmezi preparations, anyị ga-ewukwa ume anyị n'ihu na-eme a nnukwu itu ukwu.
Waseda nchoputa Shigenobu Okuma ghọtara nke a, si "Ọ bụrụ na ị chọrọ ife elu, ị ghaghị ịmụ miri,"Na m chere na nke a kapịrị ọnụ, na nime nmalite nke mbụ m okwu dị ka president. Afọ anọ gara aga e nweworo abụwo n'ezie banyere ịmụ iji kwadebe maka ofufe. Akpa ogbo ugbua ka enwere atọ isi ihe mgbaru ọsọ:
1. Ichepụta a doo anya ọhụụ na atụmatụ maka a nnukwu itu ukwu
2. -Ewu a Ịhazi kpuchie dabeere na zuru ụwa ọnụ ụkpụrụ
3. Mee ego ntọala mkpa iji mpi ndị ọzọ ụwa-klas oru
The ntụziaka a usoro bụ Waseda Vision 150 emeri na plan, nke rụnyere ihe mgbaru ọsọ na, atumatu maka oge elu Waseda si 150th ncheta na 2032. Na agụmakwụkwọ okirikiri, anyị ugbua emejuputa atumatu na nkeji iri na ise usoro ma guzosie ike na Global Education Center na Center maka Higher Education Studies; na research okirikiri anyị guzobesịrị ndị URA (University Research Administrator) ọnọdụ na Center maka Research Strategy; na ego, anyị akpaliwo ọkwa dị elu nke onyinye wee kubie mma ego pụta mkpokọta.
Mgbalị ndị a a ghọtara na boosted site Waseda si nhọrọ dị ka a top klas alụmdi na mba Super Global University omume. N'agbanyeghị akụkọ mba ofesi na-emekarị nke ahụ meghee mahadum ka ụwa na-emesi di omimi echiche, usoro ihe omume na-enye onyinye ego na ihe ndị ọzọ nkwado maka ihe mgbaru ọsọ anyị na-agbaji n'ime n'elu 100 nke ụwa mahadum rankings na-emepụta 100,000 zuru ụwa ọnụ ha ndị isi a afọ iri ụzọ abụọ.
The dum mahadum na-arụ ọrụ dị ka otu ìgwè iji nweta a pụta ke akpa ogbo nke anyị ọrụ. ugbu a, N'ilepụ anya n'ihu, M kpebiri na-eso atumatu maka ogbo abụọ, aiming maka Waseda, nke kacha mma.
Achụ mgbanwe site na-amụrụ ihe n'ọnọdụ
Isi-eme ihe nkiri nke a mahadum bụ ya ụmụ akwụkwọ, na ya bara uru na-ekpe ikpe site na àgwà nke ụmụ akwụkwọ ya na-azụlite ma na-eziga n'ime ụwa. N'ime afọ anọ gara aga, anyị ntị ụmụ akwụkwọ anyị na kpebisie mkpa maka ọzụzụ nchịkwa mmadụ maka ọbịbịa afọ. Anyị tinyere mgbalị ime eme mgbanwe site na-amụrụ ihe n'ọnọdụ, gụnyere mmepe nke ụlọ ọrụ maka nkwurịta okwu ahụ dabeere na-edozi nsogbu ọmụmụ, mmụba nke mpụga mmụta ohere ndị dị otú ahụ dị ka mgbanwe na programmụ na internships, na overhaul nke anyị mfọn usoro. Ụmụ akwụkwọ anyị na-agụsị akwụkwọ, gụnyere mba ụmụ akwụkwọ, bụ yardstick ndị anyị si tụọ nweta nke "ndị Best,"Na ihe ndị dike ahụ bụ itu ukwu anyị na-eme na-abịa afọ ga-chụpụrụ site oru ngo nke anyị na ụmụ akwụkwọ.
Agbasa na mbono, ewere on ịma aka ndị ọhụrụ
The nwayọọ nwayọọ na àgwà nakweere Waseda pụtara bụghị na-edozi maka na mbụ ma igafe mbono ka ukwuu elu. Na àgwà ga-abụ ihe kasị mkpa kwalitere ọbọ ụwa-klas Waseda nke anyị hụ.
Ọ bụla akwụkwọ na òtù nnyocha azụlitewo otutu Ibọrọ ndị na ọnọdụ nke ụwa ọnụ na interdisciplinary nnyocha. Anyị ngalaba na mkpara na-emepụta revolutionary research echiche, groundbreaking izi ọdịnaya na ụzọ, na otutu echiche maka institutional management. A njikere na ịnụ ọkụ n'obi maka tackling nsogbu dị oké mkpa ka ọbọ ihe mgbaru ọsọ anyị nke "Waseda, na Best. "Anyị niile ga-ike ohere na-arụ ọrụ ọnụ iji ruo ihe mgbaru ọsọ anyị n'oge nke abụọ ogbo.
Inye onyinye iji uwa site n'aka-Waseda si research, omenala na mmụọ
na 1913, dị ka akụkụ nke ya Mission kwuru site Shigenobu Okuma, Waseda University mbọ iji "na-eme ka ọganihu nke ihe ọmụma ... na ịgbatị ya mmetụta na ọrụ na-nke dị ebe niile." A na narị afọ mgbe e mesịrị, nke ugbu a afọ na-achọ a ọhụrụ nkwupụta ka ụwa. Dị ka anyị mee ihe maka ihe ịma aka n'ihu, anyị ga-re-enyefe onwe anyị nye ifiọkde University mbụ ozi.
Ọ dabara nke ọma, Waseda University a na-akwado ọtụtụ nkà nkụzi, Alumni na ụmụ akwụkwọ. Anyị na-gọzie ihe nketa na omenala akọ ebe ọ bụ na 1882. Nke abụọ ogbo a ga-propelled site n'enweghị ike ọgwụgwụ mgbalị mụbaa Waseda na-eme nke, na-edu ererimbot ke ọhụrụ, na a mkpebi mbanye-eme ka ụwa.
Ịgbaso roadmap nke Vision 150 plan, na ngalaba, Alumni na ụmụ akwụkwọ na-arụ ọrụ na imekọ ihe ọnụ dị kwupụta Waseda, nke kacha mma, M n'aka na ọ ga-aghọ a mahadum nke anyị nile pụrụ ime ihe ndị ọzọ nganga.
Gụsịrị akwụkwọ School of Letters, Arts na Sciences
Gụsịrị akwụkwọ School of Education
Gụsịrị akwụkwọ School of Social Sciences
Ukpep School of Information, Production and Systems
Ukpep School of Finance, Accounting and Law
na 1882, the university had the department of political science and economics, iwu, and physical science. Along with these departments, an English language course was established, where the students of all the departments could learn English.
The department of education was established in 1903, and the department of commerce, na 1904.
Ị chọrọ discuss Waseda University ? ajụjụ ọ bụla, comments ma ọ bụ reviews
photos: Waseda University ukara Facebook